China MY Magnetic Driven Pump ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | damei kingmech စုပ်စက်
အရွယ်အစား: DN25 ~ DN300
စွမ်းဆောင်ရည် - ~ 800m3 / h
ဦး ခေါင်း - ~ ၃၀၀ မီတာ
အပူချိန်: 120 ℃ထက်နည်း
ဖိအား: 2.5 ~ 10MPa
ပါဝါ - ~ 280kW
2. အမြင့်ဆုံးနစ်မြုပ်စေသောအနက်မှာ ၇ မီတာဖြစ်သည်။
4. မောင်းနှင်မှုရိုးတံကိုလှိမ့်သောထောင့်ကထောက်ပံ့သည်။ pump shaft ကို hydraulic sliding bearing ဖြင့်ပံ့ပိုးသည်။ bearing sliding ကို pump ရဲ့ pump pump က lubricating ဖြစ်ပါတယ်။
5. သံလိုက်စုပ်စက်ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိဘဲကြောင့်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်''အဆိပ်သင့်နိုင်သော၊ လောင်ကျွမ်းနိုင်သော၊ ပေါက်ကွဲစေနိုင်သော၊ စျေးကြီးသောသို့မဟုတ်လွယ်ကူသောဓာတ်ငွေ့ရည်ကိုလွှဲပြောင်းရန်သင့်တော်သည်။ ထို့အပြင်သံလိုက်စုပ်စက်သည်လေထုအတွင်းရှိမြင့်မားသောအပူချိန်၊ အပူချိန်နိမ့်သည့်အရည်နှင့်အရည်တို့ကိုသယ်ဆောင်ရန်သင့်တော်သည်။
၇။ သံလိုက်စုပ်စက်အတွင်း၌လျှံလျှောရှိပါသည်''စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်ရန်သင့်လျော်သော။ အများအားဖြင့်တစ်နာရီအတွင်း ၁၀ ကြိမ်ထက်မပိုပါစေနှင့်။ ထိုအခါသူကစတင်ခြင်းနှင့်ရပ်တန့်နေစဉ်အတွင်းပွန်းစားခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်ပြီး၎င်း၏သက်တမ်းကိုတိုးစေနိုင်သည်။
၈။ မြင့်မားသောအပူချိန်ရှိသောသံလိုက်စုပ်စက်အတွက်၊ စုပ်စက်နှင့်သံလိုက်ဆက်နွယ်မှုနှစ်ခုကြားတွင်တိုးချဲ့ထားသောအပိုင်းတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်လွတ်လပ်သောသံသရာနှစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၉။ အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းသံလိုက် pump ၏ axial force သည်ဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းအားဖြင့်အလိုအလျောက်ထိန်းညှိပေးသည်။ thrust disc သည် pump သည် start နှင့် stop သောအခါ instant axial thrust ကိုသာခံသည်။
ရှေ့သို့ MZF သံလိုက် Drive ကို Pump
နောက်တစ်ခု: MMC သံလိုက် Driven Pump